Ihowuliseyili Bottle openers mveliso kunye nabenzi
Ukuvulwa kwebhotile sisixhobo esiphambili sokunikezela ngoku kunye nokukhetha izipho kwindawo ekhethekileyo ye-bartender, iihotele, usapho, ivenkile enkulu okanye ukusetyenziswa kwebrendi njl njl. izihlandlo neenjongo ezahlukeneyo. Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno ezahlukahlukeneyo, sinokungunda okwangoku ukusuka kumgangatho osemgangathweni ukuya kwelona liphezulu, unokukhetha i-laser okanye ukuprinta ilogo kubo ngokuthe ngqo ukuyenza ibe luhlobo lwakho olwahlukileyo, kwakhona wamkelekile kakhulu thumela uphawu lwakho kunye negama lakho phaya ngoku-odola ibhotile yesiko zivula kuthi. Ukucaciswa: Ukhetho: Ukuvula ibhotile yebhotile yokuvula, ukuvula ibhotile yekhadi letyala, into evulekileyo yokuvula ibhotile, uyilo oluvulekileyo loyilo. ● Izinto ezikhoyo: Ubhedu, i-Iron, i-Zinc alloy, i-stainless steel, i-Aluminium, njl. ● Ubungakanani: ubungakanani bokuyila obuvulekileyo kunye nobungakanani obenziwe ngokwezifiso ezikhoyo. ● Ukubeka umbala: Igolide, iSilivere, iBronzi, iNickel, iCopper, iRhodium, iChannel, iNickel emnyama, ubhedu lweAntique, isilivere yeAntique, ubhedu lweAntique, igolide yeSatin, isilivere yeSatin, umbala wesingxobo omabini, njl. ● I-logo: Isitampu, ukulahla, ukufota iifoto, ukukrolwa, ukuzoba okanye ukuprintwa kwelinye icala okanye kumacala amabini, njl. ● Iinkqubo ezahlukeneyo zokhetho, uyilo oluvulekileyo olwahlukeneyo kunye nesiko elenziweyo ziyafumaneka. ● Ukupakisha: Ukupakisha ngobuninzi, ukupakisha ibhokisi yesipho okanye ngesicelo somthengi
Bottle Bottle ezivulekileyo
Zinc ingxubevange 3D Bottle evula
IAluminiyam yeBhotile evulekileyo